TENISY - TOMPONDAKAN'NY ATSIMON'I AFRIKA :: Handefa solontena mafonja atsy Namibia i Madagasikara • AoRaha
TENISY – TOMPONDAKAN’NY ATSIMON’I AFRIKA Handefa solontena mafonja atsy Namibia i Madagasikara
Delegasiona mafonja. Fantatra ankehitriny fa handray anjara amin’ny fia­diana ny ho tompondaka ho an’ny faritra Atsimon’i Afrika sokajy latsaky ny 14 taona na U14 sy latsaky ny 16 taona na U16, izay hotontosaina ny 7 ka hatramin’ny 15 janoary ho avy izao, atsy Windhoek renivohitri’i Namibia i Madagasikara. Mpilalao roa ambin’ny folo no handeha hiatrika ity fifaninanana ity. Ny 7 ka hatramin’ny 10 janoary no hanaovana ny fifaninanana eo amin’ny olon-tokana. Avy eo vao hiditra eo amin’ny isan-tarika.
Eo amin’ny zazalahy latsaky ny 14 taona no ahitana an’i Finoana Rakotomalala, Mahefa Rakotomalala ary i Harena Rafidiarison. Ny eo amin’ny vehivavy kosa dia misy an’i Randy Rakotoarilala, Miotisoa Rasendra sy Maholy Razakaniaina.Toky Ranaivo izay miofana atsy Casablanca, Maraoka, no lohalaharana eo amin’ny zazalahy latsaky ny 16 taona miaraka amin’i Fenosoa Rasendra sy Sampras Rakotondrainibe.
Eo amin’ny vehivavy indray no misy an’i Mialy Ranaivo sy Narindra Ranaivo ary i Safidisoa Nomenjanahary.
Ny 3 janoary izao no hiainga eto Madagasikara ny ankabeazan’ireo mpilalao ireo, izay efa miomana fatratra eo amin’ny fanazarantena.
Ity fifaninanana ity dia anisan’ny hisafidianana ireo mpilalalo sy firenena hisolo tena ny faritra Atsimon’i Afrika any amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika 2019 eo amin’ny latsaky ny 14 sy 16 taona. Ankoatra an’i Mada­­­gasikara dia handray anjara atsy Namibia i Afrika Atsimo, Botsoana, Angola, Lesotho, Soazilandy, Mozambika, Maorisy, Malawi, Zimbaboe ary i Namibia mpampiantrano.
Marihina fa ny ray aman-drenin’ireo mpilalao hatrany no miantoka ny tapakila sy ny momba ny « visa » ho an’ireo mpilalao sy ho an’ny mpanazatra.
FIHODINANA FAHAROA :: Nosembanin’ny lesoka sy tranga hafa kely na dia nizotra tsara aza ny fifidianana
ZAZA TERAKA KRISMASY :: Efa nampoizin’ny rainy ny andro nahaterahan’i Mathis